Madaxweynaha Puntland, oo amray in la dhaqan-geliyo Talooyinka ay soo jeediyeen Guddigii loo xil-saaray xallinta qiima dhaca Shilin Soomaaliga. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha Puntland, oo amray in la dhaqan-geliyo Talooyinka ay soo jeediyeen Guddigii...
Madaxweynaha Puntland, oo amray in la dhaqan-geliyo Talooyinka ay soo jeediyeen Guddigii loo xil-saaray xallinta qiima dhaca Shilin Soomaaliga.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa amray in la dhaqan-geliyo Talooyinka ay soo jeediyeen Guddigii loo xil-saaray xallinta qiima dhaca Shilin Soomaaliga.
Qoraal lagu daabacay bogga wasaaradda Maaliyadda Puntland, ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Deni uu Guddiga ku raacay dhaqan-gelinta go’aannada ay soo saareen, si loo xakameeyo sicir-bararka ka dhashay qiima dhaca Shilinka.
“Madaxweynaha Dawladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku raacay in uu dhaqan galo Talooyinkii ay soo jeediyeen guddigii Arrimaha Sicirka Sarifka ee uu Guddoomiyaha u ahaa Madaxwaynihii hore ee Puntland Mudane Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud Faroole.” ayaa lagu yiri Qoraalkaas.
Go’aannada Guddigu soo saaray waxaa kamid ahaa; In cashuurta dekadda lagu qabto 20% Shillin Soomaali, in mushaharka shaqaalaha lagu siiyo 20% Shillin Soomaali, in Adeegyada Lacagta mobile-ka (Sahal iyo E-Dahab) sidoodii lagu celiyo iyo Sariflayaasha waa inay ruqsad haystaan.
Sidoo kale, waxa kamid ahaa; in cashuuraha Dowladdaha hoose Shillin Soomaali lagu qaado, in Sarifka uu jaangoynayo lana soconayo Bangiga Dowladdu, in Kalsoonida isticmaalka Shillin Soomaaliga ay kawada
Previous articleI will review your youtube SEO to help increase views
Next articleI will build premium travel affiliate website to make money online
Baarlamaanka Denmark oo ansixiyey sharci waaxda socdaalka u oggolaanaya in...
Baarlamaanka waddanka Denmark ayaa ansixiyey sharci waaxda socdaalka u oggolaanaya in ay u mustaafurin karto dadka magangelyo-doonka ee ku sugan dalkooda, kuwaas oo ka...
Wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon oo wacad ku martay...
Xisbiga Oromo Army oo ku dhawaaqay inay qaadaceen doorashada Itoobiya
Magaalada Garissa Waqooyi bari Kenya, oo laga furey sheybaar lagu...
BREAKING NEWS: Ethiopia Dagaal Culus oo ka dhacay Dalka Etoobiya
Mohamed Abdullahi Mohamed - February 2, 2021 0